Ngamunye wethu okungenani kanye empilweni yakhe bebhekene nenkinga izicathulo ezihambisanayo. Kangakanani: efana angene esitolo, zama, futhi wonke amasethi emangalisayo uhambe ekhaya - enyinyekile, asebeke bangenza ngathatheka ungakhululekile. Okufanele ukwenze kuleli cala?
Okokuqala, ake sixoxe indlela yokugwema zikhathi ezingemnandi ezifana:
- Uma kungenzeka, uncamela lesikhumba noma Suede izicathulo. Kuyinto namandla futhi ngokushesha yahlala umlenze. Ngaphezu kwalokho, uma kunesidingo, ungachitha ezinye izinqubo ukwandisa induduzo (kodwa mayelana nendlela yokwelula izicathulo ekhaya, kamuva).
- Hamba ethenga ntambama noma ekupheleni kosuku zokusebenza. izinyawo zakho ngemva kosuku olumatasa kancane avuvukile, ngakhoke zidinga izicathulo ebanzi.
- ahlole ngokucophelela imodeli zakho ozithandayo, qiniseka zama kokubili izicathulo uhambe noma, uma kudingeka, wagijima.
Nokho, uma unenkinga namanje kwenzeka, kodwa izicathulo ngakho kanje ukubuya ayikwazi kubhekwe, bese kufika ukusiza ukukhalipha kwabantu.
Iseluleko sami - ukuya okhokhelwayo! Cishe zonke okhanda izicathulo has a ithuluzi esikhethekile esisuka yayo futhi ukukusiza.
Kodwa uma isifiso noma ikhono lokubona onguchwepheshe lapho, ungazama ukubhekana bebodwa.
Zikhona amathiphu amaningi sendlela yokwelula izicathulo ekhaya. Ngizokutshela kuphela ngalabo ukuthi empeleni ukusebenza. Okubalulekile! Uma izicathulo zakho zenziwa Suede noma velor - noma kunjalo, ungasebenzisi utshwala ubuso bayo, ukhilimu, uviniga, noma ezinye izindlela (ngaphandle oqokiwe ngokukhethekile).
1. On ukudayiswa kukhona elula encane izicathulo, okuyinto zingathengwa neminyango okukhethekile ukunakekelwa nezicathulo , noma emakethe. Into ewusizo kakhulu futhi engabizi.
2. Ukusetshenziswa kotshwala futhi isixazululo amanzi (1: 1). Futha phezu futhi ngaphakathi, Goo d izicathulo uhambe Sock Friend ukuze ome.
Isexwayiso! Ukuze isikhumba lacquer okumele asetshenziswe isixazululo utshwala namanzi olinganise 2: 1.
3. Ukuze isikhumba bushelelezi ingasetshenziswa ukhilimu amafutha, uwoyela ocolisekileyo, glycerin, petrolatum noma amafutha zemifino. Coat ebusweni inkinga ezindaweni ngaphakathi futhi ake ume amahora mayelana 2 bese Goo d uhlanze Sock ezihambisanayo. Ngaphansi kwethonya-fatty acid, isikhumba kuba nokunwebeka futhi kulula ukuhlala umlenze.
4. Bamba izicathulo phezu umusi, Nigqoke amasokisi Friend futhi sizungeze amahora ambalwa.
5. Faka i-izikhwama zepulasitiki ogcwele amanzi ngaphakathi izicathulo futhi ushiye efrijini ngobusuku obubodwa. Ngaphansi kwethonya amanzi aphansi-lokushisa ikhulisa afinyelela isihlangu udonga. Ekuseni, asuse izicathulo kusuka efrijini futhi ake ume kuze kufike leso sikhathi kuze kube u-ice iqala igcwale amanzi. Khona-ke ukususa amaphakheji futhi kungaba ukubeka ngokuphepha izicathulo komuntu.
6. Amafutha nkinga upharafini izindawo imodeli nezicathulo amasokisi obukhulu.
7. Ukwanda ngokuvumelana inkinga izindawo ebusweni isixazululo 3% we acetic, Nigqoke Sock Friend uhambe ukuze ome.
Uma ungenalo isikhathi noma isifiso ukugqoka ezicathulweni Friend, ungakwazi ngaso sonke isikhathi agcwalisa imodeli ne amaphephandaba ezimanzi futhi ushiye ukuze ome.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela yokwelula izicathulo ekhaya. Nokho, qaphela uma uthenga. Ungakhohlwa ukuthi esisuka izicathulo ubude kungenzeka kuphela isigamu usayizi. Uma uzama ukuzivumelanisa ngaphansi ngokwakho izicathulo ukuthi catastrophically ongaphakeme, ugijima ingozi noma yabo, noma izinyawo zabo.